ဘယျအရပျ ဘယျဒသေမှာပဲ ဖွဈဖွဈ မွကှေကျဝယျတော့မယျဆိုရငျ ဒီအခကျြတှကေို မဖွဈမနေ သခြောစဈဆေးပါ – Nyi Ma Lay
ဘယျအရပျ ဘယျဒသေမှာပဲ ဖွဈဖွဈ မွကှေကျဝယျတော့မယျဆိုရငျ ဒီအခကျြတှကေို မဖွဈမနေ သခြောစဈဆေးပါ
လယျယွာေ မတှကေို…အကှကျ ရိုကျရောငျးသူ ဆီမှဝယျမိ တဲ့ပွဿနာေ တှတျောတျောမြားမြား ကြှနျတျောကို လာအကူအညီေ တာငျးကွတယျ…. ကြှနျတျောပထ မဦးဆုံွးေ ပာခငျြတာကမိ မိဝယျယူလိုကျ တဲ့လယျယွာေ မသညျ…အခွားနညျးသုံးစှဲခှငျ့ လန(လန၃၀)ကပြွီး သားမွလေား…..အရငျွ ကညျ့ရမယျ…
အိုခေ…အခွားနညျး သုံးစှဲခှငျ့ လန- ၃၀ ကပြွီးသားဆိုရငျ….ဘာအတှကျ ကတြာလညျး…..
၁။ သာသနမွေ အတှကျလား
၄။ အိမျယာဆောကျလုပျခှငျ့ အတှကျလားဆိုတဲ့…အကွောငျးအရာတှရှေိပါတယျ….
အခွားနညျး သုံးစှဲခှငျ့ရတိုငျး မွကှေကျရိုကျေ ရာငျးပွီးဝယျလို့မရပါဘူး….. ပုံစံ ၁၀၅. ၁၀၆ ရှိရုံနဲ့မွယောပိုငျဆို ငျကွောငျးအေ ထာကျ အထားမဟုတျပါဘူး.. မွနေယျနမိ တျသကျမှတျ ခကျြနဲ့မွရောဇဝ ငျ သာဖွဈပါတယျ…..
နောကျဆုံွးေ ပာခငျြတာကတော့ …ကိုယျခြှေးနဲစာနဲ့ဝယျယူမဲ့ မိတျဆှမြေားသ ညျ..ကိုယျဝယျယူမဲ့မွေ အကွောငျးသိရှိ နားလညျမှသာဝ ယျယူရ နျအကွံပေး ခငျြပါသညျ ။ ငွိမျးကို
(လယ၃၀ ခှငျ့ပွုခကျြပုံစံကိုပါ ပူးတှဲဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ )
#မွအေ မြိုးအစား အမြိုးမြိုး @အိမျွ ခံမွအေကွောငျး လုပျကိုငျေ နသူမြား သိကိုသိထားသငျ့တဲ့ မွအေမြိုးအစားတှကေို ဖျေါပွပေးပါမညျ။
အိမျခွံမွနေ ယျပယျနဲ့ တိုကျရိုကျ ဆကျစပျတဲ့ မွအေ မြိုးအစားတှမှော-
#မွပေိုငျမွေ ။ ။ မွပေိုငျမွဆေို တာဟာ မွို့တျောရဲ့ နယျနိမိတျအ တှငျးမှာ စနဈတကြ မွို့ကှကျေ ဖျာထုတျကာ ရောငျးခခြဲ့စဉျက ပိုငျဆိုငျထားပွီး မွပေိုငျရှငျအ ခှငျ့အရေးအပွညျ့ရှိတဲ့ မွအေမြိုးအ စားကို ဆိုလိုပါတယျ။
#ဘိုးဘှားပိုငျမွေ ။ ။ အောကျမွနျ မာနိုငျငံ ကြေးရှာမြားအ ကျဥပဒေ ပုဒျမ ၄၊ ပုဒျမခှဲ (၁၀) အရ ဘိုးဘှားမိဘ မြားလကျထကျက “ဓမ်မဦးခြ” ပိုငျဆိုငျလာခဲ့ပွီး လှဲပွောငျးဆ ကျခံခှငျ့ရှိကာ “မစိုကျပြိုးသညျ့မွေ” အမြိုးအစားကို ဘိုးဘှားပိုငျမွလေို့ သတျမှတျပါတယျ။
#ဂရနျရှိမွပေိုငျမွေ ။ ။ အောကျမွနျမာ နိုငျငံမွို့နှငျ့ ကြေး ရှာမွမြေား ဥပဒပေုဒျမ ၇(က) အရခှငျ့ပွုထားသညျ့ ဘိုးဘပိုငျမွကေဲ့သို့ အခှငျ့အရေး အဆငျ့ အတနျးရှိတဲ့ ‌မွကေို ဂရနျရှိမွပေိုငျမွလေို့ချေါပါသညျ။
#လိုငျစငျမွေ ။ ။ အောကျမွနျ မာနိုငျငံမွို့နှငျ့ ကြေးရှွာေ မမြား အပိုဒျ – ၃၀၊ ၃၄ တို့အရ၊ ကျောမတီကသတျမှတျသညျ့ စညျးကမျးခကျြမြားနှငျ့အညီ ယာယီအသုံွး ပုခှငျ့ပေးထားသော မွကေို လိုငျစငျမွလေို့ချေါပါသညျ။
#ပါမဈမွေ ။ ။ ကျောမတီ ကသတျမှတျထား တဲ့ စညျးက မျးခကျြတှနေဲ့အညီ “လူနအေိမျ” သိုမဟုတျ “အဆောကျအ အုံဆောကျလုပျနေ ထိုငျ ခှငျ့” ပွုထားေ သာ မွကေို ပါမဈမွလေို့ ဆိုလိုပါသညျ။
#မွငှေားဂရနျမွေ ။ ။ အောကျမွနျမာ နိုငျငံမွို့နှငျ့ ကြေးရှာမွမြေား ဥပဒေ ၇/၈ နှငျ့ နညျးဥပဒေ အပိုဒျ ၂၉ တို့အရ ကျောမတီကစ ညျးကမျးခကျြမြား သတျမှတျပွီး နှဈ ကာလ အပိုငျးအခွား သတျမှတျ၍ မွငှေားစာခြုပျဖွငျ့ အငှားခထြားတဲ့မွကေို မွငှေားဂရနျမွေ လို့ချေါ ပါသညျ။
#စကှာ တာမွေ ။ ။ “စကှာတာမွေ” ဆိုတာ မွငှေားစာခြုပျ မရယူခဲ့၍လ ညျးကောငျး၊ မွငှေားစာခြုပျ သကျတမျး ကုနျဆုံးပွီးေ နာကျ အသဈလဲလှယျခွငျးမပွု၍လ ညျးကောငျး မွငှေားစာခြုပျပါ စညျးကမျးခကျြ တဈရပျရပျေ ဖာကျဖကျြ၍လညျးကောငျး “မွအေဆငျ့အတနျး နိမျ့ခသြတျမှတျ ထားတဲ့ မွကေို” ဆိုလိုပါသညျ။
#ကြူးလှနျခွငျးမွေ ။ ။ လူနရေပျကှကျအ တှငျး စနဈတ ကရြှိသော အိမျရာမွကှေကျ ထဲမှာ ကြူးလှနျခွငျး “ပွစောဖွငျ့ကော ကျခံတဲ့မွေ” မြိုးကို ကြူးလှနျခွ ငျးမွလေို့ ချေါပါသညျ။
#ကြူးကြျောမွေ ။ ။ ကျောမတီပို ငျမွနှေငျ့ ကျောမတီက စီမံခနျ့ခှဲပို ငျခှငျ့ရှိတဲ့ မွပေျေါမှာ ခှငျ့ပွုခကျြ တဈစုံတဈရာ မရှိသူမြား ဝငျရောကျနထေိုငျ လြှကျရှိတဲ့ မွကေို ကြူးကြျောမွေ လို့ချေါပါသညျ။ ဗဟုသုတအဖွဈမြှဝပေါသညျ
လယ်ယြာေ မတွေကို…အကွက် ရိုက်ရောင်းသူ ဆီမှဝယ်မိ တဲ့ပြဿနာေ တွတော်တော်များများ ကျွန်တော်ကို လာအကူအညီေ တာင်းကြတယ်….
ကျွန်တော်ပထ မဦးဆုံြးေ ပာချင်တာကမိ မိဝယ်ယူလိုက် တဲ့လယ်ယြာေ မသည်…အခြားနည်းသုံးစွဲခွင့် လန(လန၃၀)ကျပြီး သားမြေလား…..အရင်ြ ကည့်ရမယ်…
အိုခေ…အခြားနည်းသုံးစွဲခွင့် လန- ၃၀ ကျပြီးသားဆိုရင်….ဘာအတွက် ကျတာလည်း…..
၁။ သာသနမြေ အတွက်လား
၄။ အိမ်ယာဆောက်လုပ်ခွင့် အတွက်လားဆိုတဲ့…အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်….
အခြားနည်း သုံးစွဲခွင့်ရတိုင်း မြေကွက်ရိုက်ေ ရာင်းပြီးဝယ်လို့မရပါဘူး….. ပုံစံ ၁၀၅. ၁၀၆ ရှိရုံနဲ့မြေယာပိုင်ဆို င်ကြောင်းအေ ထာက် အထားမဟုတ်ပါဘူး.. မြေနယ်နမိ တ်သက်မှတ် ချက်နဲ့မြေရာဇဝ င် သာဖြစ်ပါတယ်…..
နောက်ဆုံြးေ ပာချင်တာကတော့ …ကိုယ်ချွေးနဲစာနဲ့ဝယ်ယူမဲ့ မိတ်ဆွေများသ ည်..ကိုယ်ဝယ်ယူမဲ့မြေ အကြောင်းသိရှိ နားလည်မှသာဝ ယ်ယူရ န်အကြံပေး ချင်ပါသည် ။ ငြိမ်းကို
(လယ၃၀ ခွင့်ပြုချက်ပုံစံကိုပါ ပူးတွဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ )
#မြေအ မျိုးအစား အမျိုးမျိုး @အိမ်ြ ခံမြေအကြောင်း လုပ်ကိုင်ေ နသူများ သိကိုသိထားသင့်တဲ့ မြေအမျိုးအစားတွေကို ဖေါ်ပြပေးပါမည်။
အိမ်ခြံမြေန ယ်ပယ်နဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်တဲ့ မြေအ မျိုးအစားတွေမှာ-
#မြေပိုင်မြေ ။ ။ မြေပိုင်မြေဆို တာဟာ မြို့တော်ရဲ့ နယ်နိမိတ်အ တွင်းမှာ စနစ်တကျ မြို့ကွက်ေ ဖ်ာထုတ်ကာ ရောင်းချခဲ့စဉ်က ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မြေပိုင်ရှင်အ ခွင့်အရေးအပြည့်ရှိတဲ့ မြေအမျိုးအ စားကို ဆိုလိုပါတယ်။
#ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ။ ။ အောက်မြန် မာနိုင်ငံ ကျေးရွာများအ က်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မခွဲ (၁၀) အရ ဘိုးဘွားမိဘ များလက်ထက်က “ဓမ္မဦးချ” ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပြီး လွှဲပြောင်းဆ က်ခံခွင့်ရှိကာ “မစိုက်ပျိုးသည့်မြေ” အမျိုးအစားကို ဘိုးဘွားပိုင်မြေလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
#ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေ ။ ။ အောက်မြန်မာ နိုင်ငံမြို့နှင့် ကျေး ရွာမြေများ ဥပဒေပုဒ်မ ၇(က) အရခွင့်ပြုထားသည့် ဘိုးဘပိုင်မြေကဲ့သို့ အခွင့်အရေး အဆင့် အတန်းရှိတဲ့ ‌မြေကို ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေလို့ခေါ်ပါသည်။
#လိုင်စင်မြေ ။ ။ အောက်မြန် မာနိုင်ငံမြို့နှင့် ကျေးရွြာေ မများ အပိုဒ် – ၃၀၊ ၃၄ တို့အရ၊ ကော်မတီကသတ်မှတ်သည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ယာယီအသုံြး ပုခွင့်ပေးထားသော မြေကို လိုင်စင်မြေလို့ခေါ်ပါသည်။
#ပါမစ်မြေ ။ ။ ကော်မတီ ကသတ်မှတ်ထား တဲ့ စည်းက မ်းချက်တွေနဲ့အညီ “လူနေအိမ်” သိုမဟုတ် “အဆောက်အ အုံဆောက်လုပ်နေ ထိုင် ခွင့်” ပြုထားေ သာ မြေကို ပါမစ်မြေလို့ ဆိုလိုပါသည်။
#မြေငှားဂရန်မြေ ။ ။ အောက်မြန်မာ နိုင်ငံမြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများ ဥပဒေ ၇/၈ နှင့် နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၂၉ တို့အရ ကော်မတီကစ ည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပြီး နှစ် ကာလ အပိုင်းအခြား သတ်မှတ်၍ မြေငှားစာချုပ်ဖြင့် အငှားချထားတဲ့မြေကို မြေငှားဂရန်မြေ လို့ခေါ် ပါသည်။
#စကွာ တာမြေ ။ ။ “စကွာတာမြေ” ဆိုတာ မြေငှားစာချုပ် မရယူခဲ့၍လ ည်းကောင်း၊ မြေငှားစာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးေ နာက် အသစ်လဲလှယ်ခြင်းမပြု၍လ ည်းကောင်း မြေငှားစာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ေ ဖာက်ဖျက်၍လည်းကောင်း “မြေအဆင့်အတန်း နိမ့်ချသတ်မှတ် ထားတဲ့ မြေကို” ဆိုလိုပါသည်။
#ကျူးလွန်ခြင်းမြေ ။ ။ လူနေရပ်ကွက်အ တွင်း စနစ်တ ကျရှိသော အိမ်ရာမြေကွက် ထဲမှာ ကျူးလွန်ခြင်း “ပြေစာဖြင့်ကော က်ခံတဲ့မြေ” မျိုးကို ကျူးလွန်ခြ င်းမြေလို့ ခေါ်ပါသည်။
#ကျူးကျော်မြေ ။ ။ ကော်မတီပို င်မြေနှင့် ကော်မတီက စီမံခန့်ခွဲပို င်ခွင့်ရှိတဲ့ မြေပေါ်မှာ ခွင့်ပြုချက် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသူများ ဝင်ရောက်နေထိုင် လျှက်ရှိတဲ့ မြေကို ကျူးကျော်မြေ လို့ခေါ်ပါသည်။ ဗဟုသုတအဖြစ်မျှဝေပါသည်
Previous post အခြိနျ(၃) နှဈယူပွီး လူပေါငျး (၁)ထောငျကြျော နဲ့ ဖကျြစီး ခဲ့တာတောငျ မပကျြစီး သှားတဲ့ အံ့ဖှယျဘုရားကြောငျး . . . .
Next post တရုတျ ဖုနျးရှပေညာ အရ ရခေဲသတ်ေတာပျေါမှာ တငျမထားသငျ့တဲ့ ပစ်စညျးတှေ….တကယျလို့ တငျထားမိရငျ ဘာဖွဈမလဲ….